35000LPH VAIA35000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VAIA35000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၃၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 35000
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရေစစ်ထုတ်သောလိုင်း , RO-VAIA-mm
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA35000
The product applying the most advanced RO water purification technology today, 35000LPH VAIA35000 Purified Water Filtration System is designed specifically for filtration and treatment of pure water with large capacity, suitable for large-scale production facilities.
ယနေ့ခေတ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာဖြစ်တဲ့ RO ရေစစ် နည်းပညာ အသုံးပြုထားတဲ့ 35000LPH VAIA35000 စက်က ရေစစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း မြင့်မားတာကြောင့် ပစ္စည်းအများကြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် အလွန်သင့်တော်ပါတယ်။
Collective image of Viet An company Viet An ကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့လိုက်ပုံ
With the production process monitored according to ISO 9001:2015 standards, the water quality always ensures the QCVN 6-1:2010/BYT purity standard of the Ministry of Health, so there are many investors interested in This industrial ro water filter specialized system.
ISO 9001:2015 စံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ RO ရေစစ်ကို အဓိက အသုံးပြုထားတဲ့ ဒီစက်ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ များပြားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Viet An General Trading Joint Stock Company is proud to be one of the leading units in providing industrial purified water treatment and filtration systems withafull capacity from 300 liters / h to 70,000 liters / hour. h to meet all different usage needs of customers. In this article we would like to introduce to you the product line of water purification withalarge capacity of 35000 liters / h which is 35000LPH VAIA35000 Purified Water Filtration System.
Viet An ကုမ္ပဏီသည် တစ်နာရီလျှင် ၃၀၀ လီတာမှ ၇၀၀၀၀ လီတာအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ရေစစ်ပစ္စည်းတွေကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ ထိပ်တန်းယူနစ်တွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်တာကြောင့် အလွန်ပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့က တစ်နာရီမှာ ၃၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ 35000LPH VAIA35000 အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The superb water filtration capacity of 35000LPH VAIA35000 Purified Water Filtration System
35000LPH VAIA35000 စက်၏ ထိပ်တန်း ရေစစ်နိုင်စွမ်း
Rated as the most intelligent water filtration system today, with the application of RO water filtration technology - reverse osmosis, using RO membrane filter to treat water, the finished water after being treated through this system. always ensure quality standards. The reason that RO membrane is considered to be the best filter is because the filter slot size of RO membrane is only about 0.0001 micro meter, so when the water treatment is done, only water molecules can pass through RO membrane. 99.9% metal ions, impurities, virust, harmful bacteria will be trapped and eliminated through wastewater. The output water after the filtration process is purified water that meets the standards of QCVN 6-1:2010/BYT of the Ministry of Health that can be drunk directly without boiling.
ယနေ့ခေတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရေစစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ RO ရေစစ်နည်းပညာ၊ ပြောင်းပြန်အိုစမိုးစစ် အပလီကေးရှင်းတို့နဲ့အတူ RO အလွှာရေစစ်ကို အသုံးပြုကာ ဒီစနစ်ကို ဖြတ်ပြီး စစ်ထုတ်ထားတဲ့ရေကို ကွာလတီပြည့်မီစေပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ RO အလွှာပါးကို အကောင်းဆုံးရေစစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြလို့ပါ။ အလွှာပါးက ၀.၀၀၀၁ မိုက်ခရိုမီတာ အရွယ်အစားပဲရှိတာကြောင့် ရေစစ်ပြီးတဲ့အခါ ရေမော်လီကျူးတွေသာာ အလွှာပါးကို ဖြတ်နိုင်ပါတော့တယ်။ ၉၉.၉% သော အိုင်ယွန်း၊ အညစ်အကြေး၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားတွေကို ရေဆိုးမြောင်းထဲ စွန့်ထုတ်လိုက်ပါမယ်။ ရေစစ်လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့ ရေက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ရေသန့်ဖြစ်ပြီး ကျိုချက်စရာ မလိုဘဲ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
In addition, with the continuous improvement and improvement, the 35000LPH VAIA35000 Purified Water Filtration System also hasamineral generator, which will supplement minerals that are beneficial to the body, so pure water hasacool taste, easy to drink. and good for your health.
ဒါ့အပြင် တိုးတက်ပြီးရင်း တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ 35000LPH VAIA35000 မှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် သတ္တုဓာတ် ဂျင်နရေတာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေသန့်က အရသာကောင်းမွန်ပြီး သောက်သုံးရလွယ်ကူကာ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
Health experts recommend that you drink at least2liters of wateraday and adhere toareasonable diet and exercise because doing so will best prevent disease and also improve your quality of life. very effective. Using purified water filtered through 35000LPH VAIA35000 Purified Water Filtration System you will be able to:
ကျန်းမာရေး ပညာရှိတွေက တစ်နေ့မှာ ရေ ၂ လီတာသောက်သုံးခြင်း၊ သင့်တင့်သော အစားအစာစားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းတို့က ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တာကြောင့် ထိုသို့ ပြုလုပ်ပေးဖို့ အကြုံပြုကြပါတယ်။ 35000LPH VAIA35000 ရေစစ်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အောက်ကအချက်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
Detoxify, increase resistance: Depending on the condition and body weight of each person, there isadifferent regimen of water, but every day should use 7-8 glasses of water to help your body have enough energy. increase the ability to excrete harmful toxins to the body through urine, help the kidneys function better.
အဆိပ်အတောက်ဖြေပေးခြင်း၊ ခုခံအားတိုးစေခြင်း- လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် အခြေအနေကို မူတည်ပြီး ရေသောက်သုံးရမယ့် ပမာဏက ကွဲပြားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ အင်နာဂျီကို ဖြည့်ဆည်းဖို့နှင့် အဆိပ်အတောက်တွေကို ဆီးထဲပါသွားစေပြီး ကျောက်ကပ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုပြီးကောင်းမွန်စေဖို့ တစ်နေ့မှာ ရေ ၇ ခွက် ၈ ခွက် သောက်သင့်ပါတယ်။
Treatment of constipation: When eating spicy foods too much, it will make the body tired and always feel thirsty because the above foods cause the body temperature to rise rapidly, thus sweating and suffering. dehydrate rapidly. It also makes the stomach work at high intensity, unable to digest food properly. Therefore, it will be very difficult for you to pass and be prone to constipation and hemorrhoids. At this point, you need to drink more water, into large sips to speed upabetter metabolism.
ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကုသခြင်း- စပ်သော အစားအစာတွေကို အများကြီးစားမိတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပင်ပန်းစေပြီး ရေလည်းဆာစေပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အစားအစာတွေက ကိုယ်အပူချိန်ကို မြင့်တက်စေပြီး ချွေးထွက်ကာ ရေဓာတ်ကို လျင်မြန်စွာ ကုန်ဆုံးစေပါတယ်။ ဒါက အစာအိမ်ကို အစာချေနိုင်စွမ်း နည်းစေပါတယ်။ ဒါက အစာတွေကို ချေဖျက်ဖို့ ခက်ခဲပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ သွေးလိပ်ခေါင်းရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်လွယ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေကို ပိုပြီးသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Structure of 35000LPH VAIA35000 Purified Water Filtration System inox autovan
35000LPH VAIA35000 ရေစစ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ
Before using any device,athorough understanding of the structure and operating principle is very essential and indispensable. The more you know it, the easier it is to use and avoid unnecessary problems. Here Viet An would like to introduce the main components ofawater filtration system as follows:
ဘယ်ပစ္စည်းကိုမဆို အသုံးမပြုခင် ပစ္စည်းရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို သေချာနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်က စက်အကြောင်းကို ပိုပြီးသိရှိလေလေ အသုံးပြုဖို့ လွယ်ကူလေလေ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေကို ရှောင်နိုင်လေလေ ဖြစ်တယ်။ Viet An မှ ရေစစ်ရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
Pump: Made by Italian technology to pump water onto the cleaning system, while ensuring constant supply water.
ရေစုပ်စက်-သန့်ရှင်းပေးခြင်း စနစ်ဆီကို ရေကို စုပ်တင်ဖို့အတွက် အီတလီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ရေကို တည်ငြိမ်စွာ ပေးပို့ပေးပါတယ်။
Air disinfection light system: createasterile atmosphere.
လေပိုးသတ်မီးရောင်စနစ်-ပိုးသတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
Prefilter system: including particulate filter materials such as quartz sand, activated carbon, cationic particles, ... and filter elements, prefilter column, filter column in the 35,000 VAIA chain, can filter the Heavy metals precipitate, detoxify, deodorize and soften water.
အကြိုရေစစ်စနစ်- 35000 VAIA ချိန်းမှာ သလင်းကျောက်၊ ကာဗွန်၊ ကပ်ရှင်အမှုန်များ၊ ရေစစ်ပစ္စည်းများ၊ အကြိုရေစစ်ကော်လံ၊ ရေစစ်ကော်လံတွေ ပါဝင်ပြီး ကြီးမားသော သတ္တုများ၊ အဆိပ်အတောက်၊ အနံ့အသက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ရေကိုပျော့စေပါတယ်။
RO membrane system: using reverse osmosis method, allowing only pure water to pass through, completely removing remaining impurities.
RO အလွှာပါးစနစ်- ပြောင်းပြန် အိုစမိုးစစ်နည်းကို အသုံးပြုပြီး ရေသန့်တွေကိုသာ ဖြတ်စေကာ ကျန်ရှိနေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေအားလုံးကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
UV light system, Ozone machine, ... can kill all harmful bacteria.UV light system, Ozone machine, ... can kill all harmful bacteria.
UV အလင်းရောင်၊ အိုဇုန်းစက်- အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားများကို သတ်ပေးသည်။
Water flow meters, pressure gauges, solenoid valves from Korea, ...
ကိုရီးယားမှ တင်ပို့သော ရေစီးဆင်းမီတာ၊ ဖိအားတိုင်းကိရိယာ၊ သံလိုက်အဆို့
Stainless steel bracket and plumbing and some other components.
စတိန်းလက်စ်စတီး ခြင်း၊ ပိုက်နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ
The benefits you get when buying 35000LPH VAIA35000 Purified Water Filtration System Viet An's autoval stainless steel filter column
35000LPH VAIA35000 ရေစစ်ကို ဝယ်ယူတဲ့အခါ ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
When buying products from Viet An company, customers will experience professional, dedicated and thoughtful care fromateam of professionally trained staff.
Viet An မှ ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူတဲ့အခါ ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်သော လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဆီမှ အရမ်းကို စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ ဂရုစိုက်မှုကို ရရှိမှာပါ။
Thousands of gifts, meaningful and practical discounts for each customer when buying our water purification equipment.
ကျွန်တော်တို့ဆီမှ ရေသန့်စက်တွေ ဝယ်ယူသူများအတွက် လက်ဆောင်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ၊ လက်တွေ့ဆန်သော ဒစ်စကောင့်တွေ ရှိပါတယ်။
The price of 35000LPH VAIA35000 Purified Water Filtration System autoval is always competitive, cheaper than other competitors, but the quality is still guaranteed.
35000LPH VAIA35000 ရေစစ်က အခြားစက်တွေထက် ဈေးနှုန်းပိုပြီး ချိုသာတယ်ဆိုပေမယ့် ကွာလတီကတော့ အာမခံပါတယ်။
Flexible payment methods, creating the best conditions for customers such as bank transfers.
ငွေပေးချေရတာ လွယ်ကူခြင်း- ဝယ်ယူသူတွေက ဘဏ်ကနေ ငွေပေးချေလို့ ရပါတယ်။
Long-term warranty 35000LPH VAIA35000 Purified Water Filtration System, supporting free shipping in Hanoi and Ho Chi Minh as well as other provinces across the country. Customers can return the product if there is any error or problem caused by the manufacturer.
35000LPH VAIA35000 ရေစစ်က ရေရှည် အာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ဟနွိုင်း၊ ဟိုချီမင်းနဲ့ အခြားဒေသများသို့ အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေက ထုတ်လုပ်သူကြောင့် ဖြစ်တဲ့ မှားယွင်းချက် ပါရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြန်လဲလို့ ရပါတယ်။
If you want to buy industrial water filtration line, want to install 35000LPH VAIA35000 Purified Water Filtration System. .
တကယ်လို့ သင်က ရေစစ်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် 35000LPH VAIA35000 ရေစစ်ကို ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
1 Push pump with 304 Stainless steel head စတိန်းလက်စ်စတီးခေါင်းပါသော တွန်းအားရေစုပ်စက်2unit Ebara/ Pentax-Italy
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်မီးအိမ် 30 unit VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်မီးအိမ်ရုံ 30 unit VA/ USApec
4 304 stainless steel tank 304 စတိန်းလက်စ်စတီးတိုင်ကီ2unit VA/ USApec
7 Autovalve အော်တိုအဆို့2unit VA/ USApec
8 304 stainless steel tank 304 စတိန်းလက်စ်စတီးတိုင်ကီ2unit VA/ USApec
9 Autovalve အော်တိုအဆို့2unit VA/ USApec
11 304 stainless steel tank 304 စတိန်းလက်စ်စတီးတိုင်ကီ2unit VA/ USApec
12 Autovalve အော်တိုအဆို့2unit VA/ USApec
14 40” PP Filter Cartridge ၄၀ 40 unit VA/ USApec
15 Industrial filter housing စက်ရုံသုံးစစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်2unit VA/ USApec
16 304 stainless steel booster pump 304 စတိန်းလက်စ်စတီးအားပြင်းရေစုပ်စက်2unit Ebara/ Pentax-Italy
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ် 10 unit VA/ USApec
18 RO membrane ROအလွှာပါး 20 unit Hitech-USA/CSM Korea
19 Flowmeter စီးဆင်းသောမီတာ4unit Taiwan
20 Pressure gauge ဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ 11 unit Taiwan
21 Oil pressure gauge ဆီဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ2unit Taiwan
22 Solenoid valve သံလိုက်အစို့2unit Cn Korea
23 Brine tank ပင်လယ်ရေတိုင်ကီ 1 unit VA/ USApec
25 UV lamp UV မီးအိမ် 8 unit Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက် 12 unit VA/ USApec
27 5-core Industrial filter housing စက်ရုံသုံးစစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်5unit VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယားစစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 35 unit VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá 35000LPH VAIA35000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
300LPH VAIA300 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
400LPH VAIA400 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
750LPH VAIA750 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
1000LPH VAIA1000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
1200LPH VAIA1200 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
1500LPH VAIA1500 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
2000LPH VAIA2000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
4000LPH VAIA4000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
5000LPH VAIA5000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
10000LPH VAIA10000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
15000LPH VAIA15000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
20000LPH VAIA20000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
70000LPH VAIA70000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်